Puntlandtimes (Boosaaso)-Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si adag uga hadlay weerarkii lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso iyo tallaabooyinka ay qaadi doonaan ka xukuumad ahaan.
Madaxweynaha Punttland ayaa caddeeyey inaysan marnaba ka aamusi doonin dhibaatada ka dhacday goobtaasi isla markaana ay ciidanka Puntland tallaabo milatari ka qaadi doonaan malayshiyaadkii weerarka xabsiga weyn ee Boosaaso.
Ka sokow kooxdii weearka soo qaaday waxaa madaxweynuhu sheegay inay socdaan baaritaano lagu samaynayo cidkasta oo lahayd mas’uuliyadda shaqo ee xabsiga isla markaana sharciga la marsiin doono ciddii lagu helo inay ku lug lahayd howshaasi.
Jaalle MADAXWEYNE-bil saddex, waa adigii wasiirka AMNIGA samaystaye, inta hawshiisa u dhaafto, Xamar kaalay oo saxeex wixii aad qaybta ka ahayd ee aad guddiga farsamada u dirsatay. Waxba xaafaddaada haku meeraysanne garoonka soo gal.